यस्तो छ शनिबार व्रतकथा ! एक पटक सूर्य, चंद्रमा, मंगल,बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू र केतु यी समस्त ग्रहहरूका माझमा एकाआपसमा हामीमध्ये सबैभन्दा को ठूलो भन्ने विषयमा झगडा भयो । सबै आआफूलाई ठूलो मान्दथे । आपसमा विवाद नसुल्झिएपछि ती ग्रहहरू आआफ्ना तर्क र अडान लिएर देवराज इंद्र भए ठाउँमा गए । त्यसपछि इन्द्रलाई सबैले एक […]
यस्तो छ शनिबार व्रतविधि ! हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वार व्रत बस्ने गरिन्छ । शनिबार व्रतविधिको वारेमा जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ । शनिबारको व्रत शनि ग्रहको अनिष्ट फलको परिशमन गर्न, शान्तिकामनका निम्ति तथा जीर्ण रोग, शत्रुभय, आर्थिक संकट एवं मानसिक सन्तापको निवारणका लागि लिइन्छ । धनधान्य वृद्धि एवं व्यापार वृद्धिको उद्देश्यले पनि यो व्रतको पालना […]
शनिबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ?
शनिबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? हिन्दु धर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। हेरौँ, शनिबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ । शनिबार कसैलाई पनि शनिदेवको दृष्टि नपरोस् भन्ने उदेश्यले यस दिन शनिदेवको […]
यस्तो छ शुक्रबार व्रतकथा ! माणिकपुर नामको कुनै एउटा नगरमा कायस्थ, ब्राह्मण र वैश्यका पुत्रहरू बीचमा गहिरो मित्रता थियो । तिनीहरू प्रायशः सँगसँगै बस्ने, उठ्ने, सुत्ने, खाने र हिँड्ने गर्दथे । तीनै जनाको विवाह भैसकेको थियो । ब्राह्मण र कायस्थका छोराहरूको त मैतालु समेत ल्याइसकेको थियो तर वैश्यपुत्रको द्विरागमन हुन भने बाँकी थियो । एक […]
यस्तो छ शुक्रबार व्रतविधि ! हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वार व्रत बस्ने गरिन्छ । शुक्रबार व्रतविधिको वारेमा जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबारको व्रत शुक्र ग्रहको प्रतिकूल फलको निवारणका लागि तथा विवाह, सन्तति आदि भौतिक सुख समृद्धिका निम्ति लिने प्रचलन छ । श्रावण महिनाको पहिलो शुक्रबारबाट यो व्रतको प्रारम्भ गरेमा विशेषरूपमा लक्ष्मी कृपा प्राप्त हुन्छ […]
शुक्रबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ?
शुक्रबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? हिन्दु धर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। हेरौँ, शुक्रबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ । शुक्रबार नेपाली पात्रो अनुसार शुक्रबार हप्ताको छैठौं दिन हो। ज्योतिषशास्त्र अनुसार […]
यस्तो छ बिहीबार व्रतकथा ! धेरै-धेरै पाहिलेको कुरो हो – एकजना असाध्यै प्रतापी र दानी राजा थियो । ऊ प्रत्येक बिहीवारका दिन व्रत लिन्थ्यो र पुण्यकर्म गर्दथ्यो । यस्तो क्रियाकलाप उसकी रानीलाई मन पर्दैनथ्यो । उसकी रानी न त व्रत नै लिने गर्दथी, न त कसैलाई एक पैसा दान नै गर्दथी । उसका इच्छाले राजाले […]
यस्तो छ बिहिबार व्रतविधि ! हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वार व्रत बस्ने गरिन्छ । बिहिबार व्रतविधिको वारेमा जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ । वैवाहिक सुख प्रप्तिका लागि, गुरु बृहस्पतिको अनिष्ट फ़ल निवारणका निम्ति तथा विद्या, पुत्र सन्तान एवं धन प्राप्तिका लागि बिहिबारको व्रतको सम्पादन गरिन्छ । यो व्रत शुक्लपक्षको पहिलो बिहिबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । अझ त्यसदिन […]
बिहिबार कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ?
बिहिबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? हिन्दु धर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ । विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। हेरौँ, बिहिबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ । बिहिबार नेपाली पात्रो अनुसार बिहिबार हप्ताको पाँचौं दिन हो । […]
यस्तो छ बुधबार व्रतकथा ! एक पटकको कुरा हो एउटा मानिस आफ्नी पत्नी लिई आउन ससुराल गयो । त्यहाँ केही दिन बिताएपछि उसले सासु-ससुरासित विदा माग्यो । तर सबैले आज बुधवार हो, आज यात्रा गर्नु हुदैन भने । ऊ केही गरी मानेन र हठधर्मी भएर बुधवारकै दिन पत्नीलाई साथमा लिई आफ्नो घर तर्फ प्रस्थान गर्यो […]